नियन्त्रण संग खिलौने सधैं तिनीहरूलाई manipulating किनभने, तपाईं कार कहाँ जाने रोकियो गर्दा चयन गर्न सक्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई मन परायो। आर सी ट्यांक कुनै अपवाद छन्। तिनीहरूले सैन्य उपकरण रुचि भएकाहरूलाई संग विशेष गरी लोकप्रिय छन्। यसबाहेक, यस खेलौना रुचि र पूर्वप्राथमिक बच्चाहरु को छ, र प्रोटोटाइप गर्न, राम्रो विवरण आएको विशेष गरी यदि एक ट्यांक तिनीहरूलाई भन्दा धेरै पुरानो भएकाहरूलाई र त्यस्तै।
हालैका वर्षहरूमा उहाँले रेडियो-नियन्त्रित खिलौने को उद्योग मा एक वास्तविक क्रान्तिको गरिएको थियो।
निस्सन्देह, यस्तो मनोरञ्जन बीस वर्ष पहिले अस्तित्व, तर आज अचम्मको प्राविधिक सक्षमता। गाइरो, रेडियो-नियन्त्रित ट्यांक, नृत्य र कुरा रोबोट संग हेलिकप्टर - तिनीहरूले बच्चाहरु को लागि मात्र होइन तर पनि अक्सर वयस्कहरूको लागि चासो हो। छोरा वा आफ्नो पिताजी - बच्चा उपहार छनौट गर्दा, उहाँले अब आत्मा छ छ जो ज्ञात छैन। तर एक संयुक्त सोख खिलौने धन्यवाद प्रदान! तपाईं टिभी स्क्रीन र कम्प्युटर मनिटर आफूलाई टाढा आंसू र गर्न सक्छन् मा एक युद्धमा व्यवस्था गर्न "वास्तविक संसार।" किनभने त्यहाँ रेडियो-नियन्त्रित ट्यांक, प्रत्येक अन्य संग लड्न अनुमति जो छन्। सामान्यतया, तिनीहरूले एक सेट रूपमा बेचिन्छ। यस मिसिन आफूलाई चार्ज गर्न, र प्यानल ब्याट्रिहरू को स्थापना आवश्यक एक शक्ति आपूर्ति संग सुसज्जित। कार एक प्रतिद्वन्द्वीको हिट जब ट्यांक को टावर एल ई डी स्थित गरिन्छ, एल ई डी को एक बाहिर जान्छ। र ट्यांक मारा जब आफ्नो टावर यसको अक्ष वरिपरि rotates। र युद्धमा फेरि नयाँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
ट्यांक को रेडियो-नियन्त्रित मोडेल जर्मन "बाघ", "Panther" को विभिन्न संशोधनहरू प्रतिनिधित्व छन्। सोभियत सेना प्रस्तुत दिग्गज टी-34। अक्सर साथीहरूको बीचमा, र बच्चाहरु र आमाबाबुले बीच, त्यहाँ बहस आफ्नो पक्ष र प्ले गर्ने छ छन्। केटाहरु अक्सर हाम्रो सेना, तर पनि धेरै प्रसिद्ध, एक बच्चा बन्ने समयमा, यो आफ्नो टी-34 ट्यांक नियन्त्रण ceded कि माग चयन गर्नुहोस्।
एक बच्चा यस्तो खेलौना रुचि छ भने, तपाईं थप र युद्धमा सक्षम हेलिकप्टर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र बस एक अविस्मरणीय युद्धमा व्यवस्था! सबैभन्दा लोकप्रिय खिलौने, sociologists अनुसार - सबै, हेलिकप्टर र ट्यांक रेडियो पछि।
खिलौने लागत धेरै कारक निर्भर: यो उपकरण, र केही सुविधाहरू को उपलब्धता र गुणस्तर र निर्माण कम्पनी निर्माण। नियम, तिनीहरू सबै केही मोडेल बन्द गर्न सकिन्छ भनेर ध्वनि प्रभाव संग सुसज्जित छन्। हामी ध्वनि, ट्यांक लडाई सिमुलेट कि बाहेक एक खेलौना बारेमा कुरा गर्दै छन् भने प्रभाव पनि दृश्य थप्न - चमकता एक क्षतिग्रस्त मिसिन कम्पन संग टावर मा रोशनी।
आधुनिक खेलौना उद्योग को अर्को नवीनता - airgun संग आर सी ट्यांक। यो रिमोट नियन्त्रण संग एक वास्तविक मिसिन को एक सानो प्रतिलिपि, जो सानो प्लास्टिक बल गोली सक्षम अवरोध र आन्दोलन विजयी बाहेक। सामान्यतया, मोडेल डाटा लगभग 50 सेमी छ 1/16 को एक संकल्प, छ।
यी खिलौने वयस्क र बच्चाहरु दुवै प्रसन्न हुनेछ। यस्तो सोख लागि सम्पूर्ण परिवार भेला गर्न सक्नुहुन्छ - केही खिलौने नियन्त्रण गर्नेछ, र अरूलाई - दर्शक रूपमा कार्य गर्न।
खोप td toxoid एम